Tilmaamo qaar ka mid ah ciidahan soo socda: Ciida Kirismaska ​​| Ragga Stylish
Kirismaska ​​ayaa imanaya waxaanan soo jeedinaynaa inaan fulino iibsadaan taas oo hoos u dhigi doonta kaarka deynta. Waa laga yaabaa inaan ka boodno cuntada.
Mid ka mid ah su'aalaha aan isweydiineyno intaanan bilaabin dabaaldegyada waa: Sidee looga fogaadaa xad-dhaafka Kirismaska?
1 Kiilo dheeri ah
2 Tilmaamaha qaarkood si looga fogaado xad-dhaafka Kirismaska
Kiilo dheeri ah
Iyada oo ay weheliso farxad iyo raynrayn ku dheehan tahay iyo astaamaha ciidahan, Cuntada Kirismaska ​​ama Sannadka Cusub ayaa noo horseedi doonta burburka aan caadiga ahayn caloosha. Isla mar ahaantaana jeebka iyo madaxa.
Waa inaad taas xasuusataa xafladaha iyo kulannada qoysaska waa inaan ku darnaa qado-ganacsiyeedka.
Sahanno la qaaday qaarkood ayaa lagu soo gunaanaday in, inta lagu jiro xilliga Kirismaska, waxaan heli karnaa inaan kasbano qiyaastii seddex kilo celcelis ahaan qiyaastii. Taasi waa, maalmo yar gudahood waxaan ku cuni karnaa isla kalooriyadii aan cuni lahayn toddobaad gudihiis waqti kasta oo kale oo sanadka ka mid ah.
Tilmaamaha qaarkood si looga fogaado xad-dhaafka Kirismaska
El khamri cas wuxuu ka cayilan yahay khamriga cad.
Xafladaha iyo xafladaha qoyska, ayaa nasasho iyo xasillooni Waxay naga celineysaa inaan helno kiilo dheeri ah. Neerfaha iyo xiisaha waxay u horseedaan cunto aan xakamayn.
Cider sidoo kale wuu ka naaxiyaa yar yahay kan loo yaqaan 'champagne', wuxuu na siiyaa kalooriyaal yar.
Weligaa ha iloobin inaad jimicsi sameyso. Waa lagama maarmaan in la jimicsado, maalmaha ka hor cashada Kirismaska, iyo gaar ahaan maalmaha ka dambeeya.
Dadka sonkorowga qaba ee raba inay ku raaxaystaan ​​cabitaanka macaan, suuqa waxaa sidoo kale jira macmacaan Kirismas ah oo caadi ah, oo si gaar ah loogu sameeyay dadka qaba cudurka macaanka.
Caado fiican ma aha in la seexdo wax yar ka dib cashada, gaar ahaan haddii ay tahay casho sharaf badan. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad dhowr saacadood oo dheeri ah aad la joogto qoyska, ama aad u sheegto kaftan ama sheeko xariir ah.
Bilaw wanaagsan oo cashadan weyn waa in lala sameeyo maraq, saladhyo iyo maraqyo.
Inta lagu jiro cashada Kirismaska ​​ama cuntada, ha cabin dareere aad u badan, oo aad uga sii yar haddii ay tahay cabitaanno khamri ah.
ka macmacaanka Kirismaska ​​ee caadiga ah waa in loo qaataa si dhexdhexaad ah, oo lagu magdhabo inta ka hartay nafaqooyinka ku jira cuntada.
Marka ay timaado wax iibsiga, waa inaad iibsataa kaliya waxa lagama maarmaanka ah, iyada oo aan lagaa qaadin dalab ama rabitaan ganacsi.
Ilaha sawirka: Beevoz / Cunto muhiim ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Sidee looga fogaadaa xad-dhaafka Kirismaska?